China Tungsten Carbide Tsvimbo Kugadzira uye Fekitori | N & D Carbidhi
* H6 kubvumidza
Tsvimbo dzakasimba dzesimbi carbide tsvimbo dzinoshandiswa zvakanyanya kune dzakasimba mhando carbide maturusi senge ekugaya cutters, magumo ekugaya, drill kana reamers. Inogona zvakare kushandiswa pakucheka, kutsika uye kuyera maturusi. Iyo inoshandiswa mupepa, kurongedza, kudhinda, uye isiri-ferrous simbi yekugadzirisa maindasitiri.
Tungsten Carbide Rods (inonziwo Cemented Carbide Rods), anoshandiswa kugadzira maturusi emhando yepamusoro ekucheka maalloys anopisa kupisa, akadai sekupera chigayo, chibooreso, reamer. Iine mavara ekuomarara kwakanyanya, yakasimba simba, makemikari akatsiga, yakaderera yekuwedzera coefficient, magetsi uye kupisa kuitisa, iyo sintered tungsten carbide tsvimbo inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yekugadzira nzvimbo.
Tsvimbo dzakasimba dzesimbi carbide tsvimbo dzinoshandiswa zvakanyanya kune dzakasimba mhando carbide maturusi senge ekugaya cutters, magumo ekugaya, drill kana reamers. Inogona zvakare kushandiswa pakucheka, kutsika uye kuyera maturusi. Iyo inoshandiswa mupepa, kurongedza, kudhinda, uye isiri-ferrous simbi yekugadzirisa maindasitiri. Carbide tsvimbo dzinogona kushandiswa kwete chete ekucheka uye ekuchera maturusi asiwo kune yekuisa tsono, akasiyana roll akapfeka zvikamu uye zvakaumbwa zvinhu. Uye zvakare, inogona kushandiswa muminda mizhinji, senge michina, kemikari, peturu, simbi, zvemagetsi uye maindasitiri ekudzivirira.
Nyanzvi mune tungsten carbide denderedzwa mabara, ine yakatanhamara chigadzirwa mutsetse wekutonhodza uye yakasimba carbide tsvimbo, isu tinogadzira uye tinochengeta unground uye pasi carbide tsvimbo iwe. Yedu h6 yakakwenenzverwa chamfered yekucheka maturusi akasiya ndiyo inonyanya kufarirwa.
Pashure: Yakagadziriswa Tungsten Carbide Rotary Burrs
Zvadaro: Tungsten Carbide Plates